Mushandirapikiso unopikisa oligarchs & Mafia. Worldwide.
Sticky post By Oliver Bienkowski On 18. February 2018
Muchikwata chinopikisa mafia oligarchs uchawana chidimbu chezviito pane peji ino.
Panguva yatakanga tiri muGrisi kwevhiki imwe chete, kwataive tine maitiro ekugadzirira kurwisa oligarchy. Tiri kuronga yedu
Kuti tirambe tichikoka kune dzimwe nyika, tinodawo rubatsiro rwenyu.
Chikamu chehurumende yehurumende ndeyehutongi
Pasinei nedambudziko rezvemari rakaparadza, pasinei "nekuchinja", Greece yakaramba iri mumaoko emaoligarchs. Iyo nheyo yekutonga inosimbisa chiitiko ichi uye inowedzera simba revashomanana kupfuura vazhinji. Nechikomborero cheTroika, hupfumi hwematongerwo enyika hunochengetedzwa uye hunotengeswa pamutengo wekugogodza kune vashoma vemhuri dzemhuri dzakasimba.
Mubhuku George Orwell kuti 1984 wemasimbaose Big Brother akamuka yakakura mapepa uye tele sefa pamusoro vagari uye akaratidza ndiani webasa: munhu utsinye, udzvinyiriri mamiriro. The makobvu nhasi, vaya kudhonza parukungiso seri noruzhinji, kuita zvikuru achinyengera, asazivikanwa uye muchivande. Tiri pixels Mubatsiri, uye tauya muna February kuAtene kukandira chiedza chikuru pamusoro ichi kukanganwika zviso. Tiri pano rokushora guva kusaruramisira echiGiriki vanhu. Orwellian maberere kuna Bundestag, aichimbova mamiriro rotari OPAP, dzimbahwe chepamusoro pakati Motoroil Hellas uye rechiGiriki Parliament, achitungamirirwa nomudzimu Pixel Mubatsiri, kunetseka muchiGiriki uye dzakawanda vezvenhau kuti simba oligarchs zvakavanzika anouya yakatsviriridza. kupindira yedu pfungwa mbiri nechepakati inofananidza rechiGiriki oligarchy.
Dimitris Melissanidis, zita remadunhurirwa rokuti "Tiger", akakwanisa kutenga hurumende yokubhejera chindingindingi OPAP kuti chikamu ukoshi hwayo chaiyo pamwe chete Czech rakapiwa makambani. The okutengesa okumugamuchira OPAP haina inopiwa echiGiriki vezvenhau akabvunza, sezvo OPAP mumwe akasimba, kana kwete simba kupfuura nevezvenhau bhajeti kuGreece, zvichiita simba rake mukati rechiGiriki vezvenhau sokuti risingaperi. Journalists uyo akaisa simba Melissanidis mu mubvunzo akanga kutyisidzirwa kare uye kunyange vakagamuchira rufu vanotyisidzirwa. Chose chibhubhubhu vakashandisa aimbova sachigaro Greek Privatization Agency, Stelios Stavridis, uyo aitarisira OPAP ngaakuitirei, hwevatambi ndege kuti Melissanidis dzibhururuke mazororo ake ...
Vardis Vardinogiannis nemhuri yake vanoonekwa "mamiriro mukati ezvinhu". Runyerekupe ane kuti makambani ayo mafuta inokurukurwa sezvo chikonzero chikuru nei zviwi Greek vachiri ainyanya wakashanda pamwe tsvina uye anodhura Diesel emagetsi pane dzakachena renewable simba zvinyorwa. Simba mhuri Vardinnogiannis haina akapikisana muGreece, sezvo Clan zvinokosha zvikamu Greek nhau (mbiri kupfuura private dzepaterevhizheni kuva mhuri), Football zvikwata uye yapfuura kudzora rwezvemabhengi zvekutepfenyura.
PixelHELPER anorayira kuti Greece iite demokrasi zvakare. Kuti zvizadzise chinangwa ichi chinoshuva, chinotanga kudikanwa kudzivirira uori maitiro eiligarchs kuburikidza nemitemo inofanirwa kuve pachena. Izvo zvinoshorwa neNovotis, zvinosanganisira vezvematongerwe enyika vakadai sevaimbova Prime Minister Antonis Samaras, inotsanangura kukurumidzira kwekunzwisisa kweGreece. Pasinei nehupfumi hweNovartis, tsika dzakashata dzakashorwa nemapoka mumushumo wechangobva kuitwa neGreep Parliament yeTransparency Committee, isina mienzaniso chaiyo. Asi kwete iyo chete. Komiti inodzivisawo kuranga mapato ezvematongerwo enyika, kunyange zvazvo mukana wekupa mvumo nhema mukati memasimba emakomiti. Izvi hazvibvumirwi zvachose uye zvinoratidza kuti tsika dzakashata dzinoramba sei dzisina kurangwa nevakuru vezvematongerwe enyika muGreece. Mukuru wechigaro weParamende yeParamende yeTransparency Committee, Tasia Christodoulopoulou, aifanira kunyara nekusaita kwake.
PixelHELPER anotsvaga kuti zvivako zvekare zvakanyatsoongororwa uye kuongororwa zvakare kuti vaone kuti zvishoma nezvakanakira mari yevanhu vechiGiriki. Sangano rinozvimiririra rekuongorora rinofanira kuongorora kana mhosva dzaitika uye, kana zvichikodzera, inotanga kupomerwa kwepamutemo kune ma oligarchs. Tinoratidza kubatana nevanhu vechiGiriki muhondo yavo yekurwisana ne oligarchs, avo vanorasikirwa munyika umo vanhu vanodarika chetatu vemo vanogara pasi peurombo. Kuipa kwePlitoti kunofanira kumira ikozvino kana kuti hakuzombotombove mukana wekutanga kwekutanga kweGreece.
Iyo PixelHELPER Foundation inyika yepasi rose, isiri purogiramu pamwe chete yevanyori uye imwe yezvakagadzirwa zvezvematongerwe enyika mune zvematongerwo enyika. Tinoona huni sechinhu chinofanira kumutsa nekumukira, sechimiro chekuzviziva kwevanhu mumweya weChiedza. Mishandirapamwe yedu inoratidza mikana yehudhi se simba rechishanu muhurumende.
Tinoda rubatsiro rwenyu kuti tirambe tichienderera mberi muGreece. Batsira ne #Paypal: paypal@PixelHELPER.tv kana http://PixelHELPER.org/de/Spenden
Nezvipo kunze kwenyika ye digital:
Musoro: Mari Inoshandiswa Kwema Art & Culture
Imprint pasina. Voucher kopi yakakumbirwa. tapota taura "press photographer: Dirk-Martin Heinzelmann, PixelHELPER.org"
Mushandirapikiso unopikisa oligarchs & Mafia. Worldwide. April 13th, 2018Oliver Bienkowski